फ्रान्सबाट फर्किएकी १ नेपाली किशोरीमा संक्रमण, कहाँ भयो कमजोरी ? – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ११ चैत्र मंगलवार १२:३७
फ्रान्सबाट फर्किएकी १ नेपाली किशोरीमा संक्रमण, कहाँ भयो कमजोरी ?
नेपालमा दोस्रो पटक कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमण देखिएको छ। फ्रान्सबाट फर्किएकी १९ वर्षीया किशोरीको आइतबार स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा भाइरस पोजिटिभ पाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘भाइरस पोजिटिभ देखिएपछि हिजो (आइतबार) बेलुका उनलाई अस्पतालमा लगेका छौं’, मन्त्री भानुभक्त ढकालले सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनमा भने। मन्त्री ढकालका अनुसार संक्रमितको उपचार टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भइरहेको छ। उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकोे जानकारी पत्रकार सम्मेलनमा दिइयो। उनी चैत ४ गते कतारको दोहा ट्रान्जिट हुँदै काठमाडौं ओर्लिएकी थिइन्। संक्रमित विद्यार्थीको गोपनीयतालाई ध्यानदिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री ढकालले विस्तृत जानकारी दिन अस्वीकार गरे। ‘उहाँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने, ‘होम क्वारेन्टाइनबाट रेकर्ड पोजिटिभ आएपछि हामीले अस्पताल पुर्‍याएका हौं।’
भाइरस संक्रमितको परिवार र घरमै क्वारेन्टाइनमा रहँदा सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको परीक्षण र आइसोलेसनमा राख्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘उहाँसँगै आएका र उहाँसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिलाई पनि खोजी गरी उपचारको दायराभित्र ल्याइनेछ’, उनले भने, ‘प्लेनमा आउँदा को-को आउनुभएको थियो ? हामी खोज्छौं।’ ती किशोरीले घर फर्किने क्रममा भियतनामकी साथीसँग कतारको राजधानी दोहासम्म सँगै यात्रा गरेकी थिइन्। उनीहरू दोहाबाट छुट्टिएर आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिँदा उनलाई ज्वरोलगायत कुनै लक्षणसमेत देखिएको थिएन। त्यसपछि उनी घरतर्फ लागेकी थिइन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
PREVIOUS Previous post: कोरोना भाइरस सङ्क्रमण – अनलाइनबाटै विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न अपिल
NEXT Next post: विश्वमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या १६ हजार नाघ्यो !